Shina: Fitsipika natolotra ho an’ny cybercafe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2019 3:05 GMT
Tamin'ny taona 2010, nanolotra soso-kevitra maromaro mikasika ny lalàna hifehezana ny cybercafe ireo mpikambana ao amin'ny Kongresim-bahoaka Nasionaly (NPC) sy ny Kaoferansa Fakankevitra Politika ho an'ny Vahoaka Shinoa (CPPCC).
Mitantana ny cybercafe ny governemanta
Araka ny tatitry ny fampitam-baovao tao an-toerana, nanolo-kevitra ny governemanta hitantana ny cybercafé ary hanidy ireo izay tsy ara-dalàna ny mpikambana ao amin'ny CPPCC Yan Qi. Miahiahy momba ny fiantraikany ratsy avy amin'ny cybercafe ho an'ny ankizy izy.
Notohanan'i Tao Hongkai, mpampianatra ao amin'ny oniversite momba ny fanabeazana sy ny sosiolojia izay nampiditra ny fomba fijery mikasika ny “fiankinan-doha amin'ny aterineto” any Shina ny sosokeviny. Nomarihiny fa mandeha any amin'ireny cybercafe ireny ny 92% ny tanora mba hilalao lalao an-tserasera. Ny tahan'ny fiantraikany tsara sy ny fiantraikany ratsy mikasika ny fisian'ny cybercafe dia 1/9 ary manohana ny fanakatonana ireo cybercafe rehetra tsy miankina izy noho izany.
Fikatonana amin'ny alina
Raha niahiahy momba ny olana amin'ny fiankinan-doha amin'ny aterineto ihany koa dia nanolo-kevitra ny lalana hanakatonana ny cybercafe eo anelanelan'ny sasakalina sy amin'ny 8 ora maraina ny solontenan'ny NPC Gao Wanneng. Namoakaa lahatsoratra momba ny fikatonana amin'ny sasakalina tato amin'ny Globalvoices i Don Weinland:
Tsy vao voalohany no natolo-kevitra ny fandrarana ny cybercafe amin'ny alina. Tamin'ny volana Novambra 2005, nahita tsikelikely ny fametrahana ny politikan'ny “fanakatonana amin'ny alina”, toy ny misy any amin'ny tanàndehibe hafa manerana ny firenena ny tanàndehiben'i Chongqing.